घट्यो सुनचाँदीकै भाउ (आजको मूल्य यस्तो !) spacekhabar
Thursday, June 04, 2020 | बिहीबार, जेठ २२, २०७७
घट्यो सुनचाँदीकै भाउ (आजको मूल्य यस्तो !)
स्पेसखबर काठमाडौं, १९ कात्तिक
नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ घटबढ भइरहनु सामान्य हो । तर, आज नेपाली बजारमा सुनचाँदी दुवैको भाउ घटेको छ ।
गएको शुक्रबारयता स्थिर रहेको चाँदीको भाउ आज (मंगलबार) भने घटेको छ । सोमबार सम्म प्रतितोला ८ सय ७० रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको चाँदीको भाउ आज (मंगलबार) भने ५ रुपैयाँले घट्दै प्रतितोला ८ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
तलमाथि भइरहने सुनको भाउ सोमबार अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला २ सय रुपैयाँले बढेर कारोबार भएको थियो । आज पुन: २ यस रुपैयाँ प्रतितोला घटेर सुनको कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ७० हजार ८ सय रुपैयाँ कायम छ । हिजो (सोमबार) भने प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै तेजाबी सुन आज प्रतितोला ७० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । तेजाबी सुन हिजो प्रतितोला ७० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा सुनमा प्रतितोला २ सय रुपैयाँ र चाँदीमा प्रतितोला ५ रुपैयाँले घटेर कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । चाडबाड सकिएसँगै सुनचाँदीको भाउ घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सुनचाँदीको भाउ घटबढ भइरहने भएकाले उपभोक्ताले पनि घटेको समयमा किन्ने गरेको पाइन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १९, २०७६, ११:४३:००
हवाइ कम्पनीले घटाए भाडा :गाडीकाे भन्दा सस्ताे !
लकडाउन खुकुलाे पार्ने माेडालिटी तयार गर्ने जिम्मा उच्चस्तरीय समितिलाई
सोती घटनाका १८ आरोपितलाई १० दिन थुनामा राख्न अनुमति
थप ३३४ जनामा संक्रमण, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो
लकडाउन खुकुलो बनाउन तीनवटै प्रशासनको सिफारिस
लकडाउनकैबीचमा तातोपानीबाट उठ्यो एक अर्ब २७ करोड राजश्व
वित्तीय क्षमता सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा १२ अर्ब ऋण स्वीकृत
बजेटबारे बाबुराम भट्टराईको टिप्पणीः क्यान्सरको रोगीलाई सामान्य झारफुक जस्तो
बजेटकाे आकार घट्याे:आगामी वर्षकाे बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड
सत्ताको आडमा हिंसाका घटना ढाकछोप गरियोः नेता पौडेल
दैलेखमा एकैदिन ११३ जनामा कोरोना संक्रमण
कांग्रेस नेतृ उपाध्यायको प्रस्तावः लकडाउन हटेको कम्तिमा २ महिनापछि कर बुझाउने समय दिउँ